Mobilada ugu fiican Shiinaha ee ka yar 100 euro - Sebtember 2021 | Androidsis
Jose Alfocea | | Shiinaha Shiinaha, Noticias
Marka la badalayo moobilkeena gacanta oo aan soo iibsaneyno casriga casriga ah, waxaa jira dhinacyo badan oo ay tahay inaan tixgalino oo aan falanqeyno, laga bilaabo cabirka iyo tayada shaashada ilaa keydka gudaha si aan u keydino dhamaan sawiradeena iyo fiidiyowyadeena, tayada kaameradaada ama awoodda batteriga, si aad maalintii oo dhan u raadsato bareesada sida waalan. Si kastaba ha noqotee, waxa run ahaantii go'aamin doona helitaankeenu wuxuu noqon doonaa miisaaniyadda aan haysano.
Sababtaas darteed, haddii aad ka fekereyso inaad cusboonaysiiso taleefankaaga casriga ah oo sidoo kale aadan awoodin ama aadan rabin inaad jeebkaaga ka dhigto mid qaawan, markaa waxaad timid meeshii ugu wanaagsanayd waayo maanta Androidsis waxaan kuugu soo bandhigaynaa xulasho wanaagsan moobiillada Shiinaha ugu fiican wax ka yar 100 euro.
1 Telefoonnada gacanta ee ugu wanaagsan Shiinaha, qiimaha ugu fiican
2 10ka moobiil ee ugu fiican Shiinaha in ka yar 100 euro
2.2 Feejignaanta Cubot S
2.9 Landvo XM100 oo lagu daray
3 Maxaan raadiyaa markaan dooranayo moobil cusub?
Telefoonnada gacanta ee ugu wanaagsan Shiinaha, qiimaha ugu fiican
Maanta Androidsis waxaan go'aansannay inaan taas tusno waxaad heli kartaa moobil fiican adigoon ka tagin mushaarka bisha at. Kuwo badan waxay u maleynayaan in taleefannada gacanta ee Shiinaha ay xun yihiin, oo tayadoodu hooseyso isla markaana ay dhaqso u burburaan, hase yeeshe, waxaa jira wax walba, sida meel walba, haddii aan si taxaddar leh uga fikirno, halka ay ku yaalliin inta badan taleefannada gacanta ee suuqa laga soo saaray. ugu qaalisan xitaa kuwa ugu raqiisan?
Sababtaas awgeed, dhammaan taleefannada gacanta ee aan maanta ku tusi doonno waxay la kulmaan saddex shuruudood oo muhiim ah:
Waxaa lagu sameeyay Shiinaha. Haa, sida iPhone ka, Galaxy S8 iyo kuwa kale oo badan oo qaali ah.
Waxay ku kacayeen wax ka yar 100 euro, inkasta oo ay tahay inaad maskaxda ku hayso in qiimayaashu aad u kala duwan yihiin mar uun, moodellada qaarkood ayaa xoogaa ka qaalisan.
Waxay yihiin tayo wanaagsan, taasi waa, ma noqon karaan kuwa ugu fiican suuqa, laakiin waa mobiillo wanaagsan, oo qiimo aad u fiican ku leh lacag, isla markaana aad ku dhageysan karto muusikada, ka dhex mari karto internetka, wici karto oo aad heli karto wicitaanno, u dirto fariimo qoraal ah, emayl , isticmaal WhatsApp, Telegram ... Kaalay, waxaad ku sameyn kartaa wax kasta oo aad qabanaysay illaa hadda adoo adeegsanaya mobilkaaga.
10ka moobiil ee ugu fiican Shiinaha in ka yar 100 euro
Oo hadda waad ogtahay waxa qoraalkani ku saabsan yahay, aan la tagno xulashadan cajiibka ah, dhammaystiran ee la cusbooneysiiyay.
Maaha taleefanka James Bond, laakiin kan Ulefone U007 Waa mid ka mid ah telefoonnada gacanta ee ugu wanaagsan uguna raqiisan Shiinaha ee aad ka heli doonto, laga bilaabo kaliya 45 euro. Ayaa la socda 5 inch shaashad HD ahs oo leh 1280 x 720 pixels xal, 8 megapixel kamarad weyns, 8 GB oo kaydinta lagu ballaarin karo gudaha kaarka microSD, Android 6.0 Marshmallow culeyskiisuna waa 136 garaam oo keliya. Intaas waxaa sii dheer, gadaalku waa cirif dheeri ah inkasta oo uu ka samaysan yahay caag, haddana wuxuu si fiican ugu daydaa aluminium caday.
Feejignaanta Cubot S
In kasta oo aysan weli ahayn sumcad sumcad leh, Cubot ayaa ku sameeyay darajada tan Feejignaanta Cubot S, taleefan casri ah oo noo yimaada 5,5 inji IPS HD shaashad ah iyo xalinta 1280 x ppm X XUMAY. Dhanka kale, gudaha waxaan ka helnaa processor 6580 GHz afar geesle ah oo loo yaqaan 'MediaTek MT1,3' oo wata Mali-400 MP2 naqshadeynta GPU, oo ay la socdaan 2 GB oo RAM ah iyo 16 GB oo ROM ah (lagu ballaarin karo kaarka microSD ilaa 64 GB). Intaa waxaa dheer, waxaa ku jira GPS, Bluetooth 4.0, laba sim, 5 megapixel kamarad weyn oo wata flash, 2 megapixel hore iyo nidaamka qalliinka Android 6.0 Marsmallow. Iyo dhamaanteed qiyaastii 82 euro.
Sidoo kale diiran Shiinaha ayaa ka yimaada tan Wax alaab ah lama helin. Qiimaha kudhowaad 75 euro, gorgortan. Astaamaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah a 5 inch shaashad HD ah iyo xallinta 1280 x 720 pixels, halka gudaha aan ka helno processor-ka A-6735 afar geesle-A53 MT1.0 oo wata XNUMXGHz 2 GB ee RAM y 16 GB kaydinta gudaha lagu ballaarin karo kaarka microSD.
Nidaam hawlgal ahaan, Doogee-kan ayaa la yimaada Android 6.0 Marsmallow, iftiiminaya gaar ahaan 2.400 mAh baytariga.
Liistadu way sii socotaa waxaanan markaa ku nimid taleefanka gacanta nooc Shiinaha laga yaqaan oo laga yaqaan Galbeedka. Waxaan ula jeednaa ZTE iyo iyada ZTE Blade L5 Plus, terminal leh p5 inch shaashad HD ah iyo 1280 x 720 qaraarka gudaha kaas oo qariya a Processor MediaTek MTK6580 1.3 GHz afar geesle ah oo ay la socdaan 1 GB ee RAM y 8 GB kaydinta gudaha in aan ballaarin karno adoo adeegsanaya kaarka microSD ee gaaraya 32 GB. The kamaradda ugu weyn waa 8 megapixels, waxay leedahay laba shaqo oo SIM ah batteriguna waa 2.150 Mah. Qiimahiisuna wuxuu ka hooseeyaa 70 euro.
Sidoo kale ka hooseeya 70 euro waa kan Lenovo Moto B in, sidii tii hore oo kale, ay leedahay oggolaanshaha haybadda soo-saareheeda.
Taleefankan casriga ahi wuxuu bixiyaa a Shaashad 4,5 inji ahs HD oo leh xalka 720 x 1280. Haddii waxa aad jeceshahay uu yahay cabbirkan, shaki la'aan waa mid ka mid ah shaashadaha ugu fiican ee aad ka heli doonto wax ka yar boqol euro.
Intaa waxaa dheer, waxay leedahay processor-ka Quad-core MediaTek oo ay weheliso Mali T720 MP1 naqshadeeyayaasha isla-shaqeeyayaasha, 1 GB ee RAM, 8 GB oo kaydinta gudaha la ballaarin karo oo la yimaado Android 6.0 Marshmallow. Ma aha in la xuso nolosha batteriga, oo socata maalinta oo dhan, markaa way kula socon kartaa.
Xuquuqda ku jirta xadka qiimaha ee aan iskood isu xil saarnay waa tan 16GB Koobee qiimahiisu waa .99,99 XNUMX waqtiga qorista qoraalkan. Waa terminal leh 5 inch HD IPS shaashad iyadoo lagu xallinayo 1280 x 720 pixels oo gudaha ka socda Android 6.0 Marshmallow laga bilaabo a MediaTek processor MTK6735 1.3GHz afar geesle ah oo ay weheliyaan 2 GB RAM xasuusta y 16 GB oo kaydinta gudaha ah oo aan ku ballaarin karno adoo adeegsanaya kaarka microSD.
Moobaylkani wuxuu kaloo iftiiminayaa jirkiisa birta ah iyo a c13 MP, f / 2.2, 27mm kamarad weyn oo leh autofocus, halka kaamirada hore ay tahay 5 MP. Iyo sidoo kale, waxay leedahay isku xirnaanta 4G.
Kaliya 60 euro waxaan ku heli karnaa tan THL T9, sidoo kale waa mid ka mid ah taleefannada gacanta ee ugu wanaagsan Shiinaha in ka yar 100 euro marka la eego qiimaha lacagta.
Waxaa ka mid ah astaamaheeda ugu waaweyn inaan a 5,5 inch shaashad HD ah iyo xallinta 1280 x 720 pixels, Processor MediaTek MT6737 1.3GHz afar geesle ah oo ay weheliyaan 1 GB ee RAM y 8GB ROM la ballaarin karo.
Waxay noogu timaadaa iyada oo leh Android 6.0 Marshmallow, GPS, Bluetooth 4.0, Dual SIM, 5 megapixel kamarad weyn oo leh auto auto, 2 megapixel camera hore iyo awood badan 3.000 mAh baytariga si aan ula tuuro maalinta oo dhan.
Sidoo kale guriga Motorola - Lenovo waxaan ku leenahay tan cajiibka ah 3 Moto E2016 taasi waa cadaalad 89 euros waxay na siisaa a 5 inch screen oo leh xalka xalka x 720 x 1280 a Processor Snapdragon 410 saacaddiisu tahay 1.4 GHz oo ay weheliso 1 GB ee RAM y 8 GB oo kaydinta lagu ballaarin karo gudaha kaarka micro SD.
Sida nidaamka qalliinka waxaa ka mid ah Android 6.0 Marshmallow iyo qeybta fiidiyowga iyo sawir qaadista waxaan ka helay a 8 megapixel kamarad weyn oo leh autofocus iyo hore kale oo 5 megapixels ah, marka lagu daro 4G isku xirnaanta.
Landvo XM100 oo lagu daray
Waan ogahay! Calaamaddan lama yaqaan inta badan oo naga mid ah, si kastaba ha noqotee, tani macnaheedu maahan inaan ka hor imaan karin mid ka mid ah moobiillada Shiinaha ugu fiican wax ka yar 100 euro. Bari Landvo XM100 oo lagu daray waxaa lagu heli karaa seddex midab oo kaliya lixdan euro waxayna na siinaysaa a 5,5 shaashad inch HD ah oo leh xalka pixel 1280 x 720 on a Processor MediaTek MT6580A afar geesle oo ay weheliyaan MaliP 400P GPU, 2 GB ee RAM y 16 GB oo kaydinta gudaha lagu ballaarin karo kaarka microSD illaa 32GB.
Waxay sidoo kale ku dartaa taageerada dual sim, 8 MP kamarad weyn, 2 MP hore, GPS iyo 2.200 mAh baytariga.
Oo waxaan ku dhamaynaynaa mid kale oo ka mid ah taleefannada gacanta ee ugu raqiisan, tan Gretel a7 con 4,7 XNUMX. shaashad iyo xallinta 1280 x 720, MediaTek processor MTK6580A afar geesle 1.3 GHz, 8 MP kamarad weyn oo leh autofocus, 1 GB ee RAM, 16GB ROM, Android 6.0 Marsmallow, Bluetooth 4.0, GPS ...
Maxaan raadiyaa markaan dooranayo moobil cusub?
Tani waa su'aasha milyan ee doolar, xitaa kaba sii badan hadda oo ay jiraan moodallo badan, oo noocyo badan leh iyo qiime kala duwan. Si kastaba ha noqotee, haddii aad si taxaddar leh u ilaalisay xulashada moobiillada Shiinaha ugu fiican wax ka yar 100 euro kor ku xusan, waxaad dareemi doontaa dhowr arrimood oo aasaasi ah oo ay tahay inaan marwalba tixgalino:
Qiimaha, laakiin qiimaha loo fahmay sida miisaaniyadda, sida xadka waxa aan awoodno ama aan dooneyno inaan qarashgareyno. Xusuusnow in sicirka sare uusan had iyo jeer la mid ahayn tayada sare.
Warranty. Inta badan taleefannada aan ku tusnay adiga waxaa laga gadan karaa Amazon, taasina marwalba waxay la mid tahay amniga. Waxa kale oo aad eegi kartaa dukaamada maxalliga ah ee ka shaqeeya Spain (ama waddankaaga) si aad ugu raaxaysato dammaanadda labada sano ah ee sharciyada Yurub u baahan yihiin. Xusuusnow haddii aad wax ka iibsato meel ka baxsan Midowga Yurub, sharciyada Midowga Yurub ma khuseeyaan.
Cabbirka iyo tayada. Miyaad doorbideysaa shaashad yar oo la maareyn karo mise waxaad jeceshahay inaad ka daawato fiidiyowyada YouTube-ka iyo taxanaha Netflix taleefankaaga casriga ah?
Awooda iyo waxqabadka. Haddii aad isticmaasho barnaamijyada caadiga ah (WhatsApp, Twitter, internet-ka, iyo wixii la mid ah) waa inaadan walwalin, laakiin haddii aad ku ciyaareysid sawiro "cajiib ah", markaa waa inaad ka taxaddartaa.
Kaydinta. Xusuusnow inaad doorato mobiil leh keyd gudaha ah oo ku filan barnaamijyada; inta hartay (muusig, fiidiyow ...) ayaa lagu keydin karaa kaarka xusuusta.
Madax-bannaanidaTaasi waa, iska hubi in mobilkaaga cusub uu leeyahay batteriga wanaagsan, gaar ahaan haddii aad waqti badan ku qaadato guriga.
Ugu dambayntiina, isku day inaadan u oggolaan in naftaadu ay si xad dhaaf ah u hagto xayeysiinta, hana iloobin in taleefanka kuugu fiican uu noqon doono kan sida ugu wanaagsan u buuxiya rajooyinkaaga iyo baahiyahaaga, ee aan ahayn midka aniga ama qof kale aan kuu sheegi doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Shiinaha Shiinaha » Telefoonnada gacanta ee ugu wanaagsan Shiinaha in ka yar 100 euro
qof kasta oo kale ayaa jecel sidaan anigu jeclahay
Nin caadi ah dijo
Hagaag maya. Way ka fiican yihiin kana jaban yihiin haddii aad ka raadiso bogagga internetka ee Shiinaha
U jawaab nin caadi ah
Waad salaaman tahay "Nin caadi ah". Runtii waa run inay jiraan xitaa taleefanno ka jaban laakiin, sidaad u leedahay, "haddii aad ka raadiso bogagga internetka ee Shiinaha." Fikradda xulashadan ayaa ah in adiguba aad leedahay nabadgelyo damaanad ku siineysa waana sababta aan ugu darnay taleefannada laga heli karo Spain (ma aqaano haddii aad halkan naga aqriso) iyo iibsashadooda, sidaas darteed, waxay ku xiran tahay dammaanad laba sano ah oo lagu aasaasay sharciga Yurub. Hada go aanku waa u madax banaan yahay midkasta, waxyar oo kaydsan wax damaanad ahna ma lihid, ama wax yar ka badan oo kharash gareeya oo dammaanad qaad.
Waxaan rajaynayaa inaad sii booqanaysid annaga iyo wixii ka sarreeya, oo aad uga tagtay faallooyinkaaga.
Maamuus 9 vs Sharafta 8 ma mudan tahay isbeddelka?